WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay In Aad Ka Ogaato 11-ka Rekoodh Ee Ugu Cajiibsan Ee Xili Ciyaareedkan Laga Jabin Karo Horyaalada La Liga, Premier Leaque, Seria A Iyo Champions Laque. – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Wax Walba Oo Aad Uga Baahan Tahay In Aad Ka Ogaato 11-ka Rekoodh Ee Ugu Cajiibsan Ee Xili Ciyaareedkan Laga Jabin Karo Horyaalada La Liga, Premier Leaque, Seria A Iyo Champions Laque.
Xili ciyaareedka cusub ee 2017/18 ayaa hadda si rasmi ah ugu bilawday qaar ka mid ah horyaalada Yurub ugu waa wayn halka kuwo kale ay dhawaan bilaaban doonaan. Laakiin xili ciyaareedka cusub waxaa jira rajo wayn oo laga qabo in uu noqdo xili ciyaareed cajiib ah sababo jira awgeed. Xili ciyaareedka cusub waxaa si wayn isha loogu hayaa tartanka kooxaha Yurub ee Champions Leaque oo August 24 isku aadkiisa heerka groupyada la samayn doono waxaana jira waxyaabo khaas ka dhigaya.
In PSG ay xili ciyaareedkan si layaableh isku hubaysay iyo in kooxaha Manchester United iyo Liverpool ay ku soo laabteen Champions Leaque ayaa xili ciyaareedka cusub ee Champions Leaque-ga ka dhigaysa mid xiiso badan laakiin sidoo kale horyaalada La Liga, Premier Leaque iyo Serie A ayaa ah kuwa sida gaarka ah isha loogu hayn doono.
Xili ciyaareed kastaaba marka uu bilaabanayo waxaa jira hami wayn oo ay koox kastaaba xambaarsan tahay waxayna koox kastaaba ku hamidaa in ay ku guulaysato dhamaan koobabka ay ku tartamayso balse kooxo yar ayaa kaga dhabeeya riyadooda laakiin sidoo kale xili ciyaareed kasta bilawgiisa waxaa jira rekoodho iyo taariikho la fisho in inta uu xili ciyaareedku socdo la gaadhi karo.
Haddaba shabakada Gool24.net oo aad uga barateen in ay warbixino dhamaystiran idiin soo diyaariso ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa 11 rekoodh oo taariikhi noqon kara kuwaas oo ay gaadhi karaan kooxo, tababaryaal ama ciyaartoy horyaalada Yurubi ah, waana rekoodho haddii ay dhacdo in la gaadho si khaas ah loo diwaan galin doono.
Rekoodhada taariikhiga ah ee aanu halkan idiinku soo gudbin doono waxaa ku jira tababarayaal magac wayn ku leh kubbada cagta si la mid ah ciyaartoyda ugu fiican kubbada cagta waqti xaadirkan sidoo kale waxaan ka maqnayn waxyaabo kale oo muhiim u ah kubbada cagta. Haddaba halkan kaga bogo xogta rekoodho iyo taariikh ay tahay in xili ciyaareedka cusub la gaadhi karo.
1-Kulamada Premier Leaque Ee Ugu Badan Ee Uu Tababare Maamulay:
Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa taariikh cusub dhigi doona xili ciyaareedka cusub ee 2017/18 wuxuuna jabin doonaa rekoodhkii layaabka lahaa ee uu Sir Alex Ferguson u dhigay horyaalka Premier Leaque. Arsene Wenger ayaa diyaar u ah in uu noqdo macalinkii abid kulamada ugu badan ee horyaalka Premier Leaque soo maamulay isaga oo haddaba magiciisa ku soo qoray 790 kulan waxaana ka horeeya Sir Alex oo soo maamulay 810 kulan oo Premier leaque ah.
Arsene Wenger ayaa u baahan in uu 21 kulan maamulo Arsenal xili ciyaareedkan si magiciisa loogu diwaan galiyo tababarihii abid kulamada ugu badan soo maamulay koox horyaalka Premier leaque ka ciyaarta wuxuuna meesha ka saari doonaa rekoodhka uu hadda Sir Alex ku haysto 810 kulan oo Premier Leaque ah waana rekoodh taariikhda u gali doona macalinka ree France.
2- Kulamadii Ugu Badnaa Ee Premier Leaque Uu Ciyaartoy Saftay:
Halyaygii Manchester United ee Ryan Giggs ayaa ilaa hadda ah ciyaartoyga haysta rekoodhka kulamada ugu badan ee uu ciyaartoy saftay horyaalka Premier leaque kadib markii uu muddo 20 sano ku dhaw ka ciyaarayay Manchester United, laakiin xili ciyaareedka cusub waxa uu arki doonaa rekoodhkiisa oo lala wareegay. Giggs ayaa rekoodhkan ku haysta 632 kulan oo uu horyaalka ingiriiska ka soo muuqday.
Gareth Barry oo kooxo badan oo horyaalka Premier Leaque ah ka soo ciyaaray ayaa duulaan ku ah rekoodhka Ryan Giggs ee kulamada ugu badan ee Premier leaque wuxuuna Barry haddaba soo ciyaaray 628 kulan isaga oo u baahan in uu Everton u safto 5 kulan oo kaliya markaas oo loo diwaan galin doono xidiga taariikhda horyaalka Premier Leaque kulamada ugu badan ka soo ciyaaray. Barry ayaa isla bilawga xili ciyaareedka cusub rekoodkan la wareegi kara.
3-Goolasha Ugu Badan Ee Hal Xili Ciyaareed Oo Horyaalka Premier leaque Ah:
Gool dhalliyaasha horyaalka Premier Leaque ayaa si joogto ah ugu soo fashilmayay in ay jabiyaan rekoodhka gool dhalinta Premier Leaque ee hal xili ciyaareed kaas oo ay hadda si wada jir ah u haystaan Andy Cole iyo Alan Shearer oo min hal xili ciyaareed soo dhaliyay min 34 gool oo premier Leaque ah, laakiin waxay goolashan dhaliyeen markii kulamada Premier Leaque ee xili ciyaareedku ay ahaayeen 42 ka kulan.
Laakiin intii kulamada horyaalka Premieer Leaque laga dhigay 38 ka kulan waxaa rekoodhka gool dhalinta hal xili ciyaareed haysta Luis Suarez iyo Cristiano Ronaldo oo min 31 gool min hal xili ciyaareed soo dhaliyay. Harry Kane ayaa ugu dhawaaday oo 29 gool hal xili ciyaareed dhaliyay balse xili ciyaareedka cusub waxaa horyaalka Premier Leaque ku soo biiray gool dhaliyaal tayo sarre leh kuwaas oo la filayo in ay jabin karaan rekoodhka gool dhalinta Premier leauqe ee hal xili ciyaareed.
4- Gool Caawinta Ugu Badan Ee Hal XIli Ciyaareed Oo Horyaalka Preier Leaque Ah:
Halayaygii Arsenal ee Thierry Harry ayaa wali haysta rekoodhka gool caawinta hal xili ciyaareed ee horyaalka Premier Leaque inkasta oo uu gool dhaiye ahaa. Kubbad sameeye kasta oo ka soo ciyaaray horyaalka Premier Leaque ayaa ilaa hadda ku soo fashilmay in ay gaadhaan 20 gool caawineed oo uu Henry soo sameeyay xili ciyaareedkii 2002/03, waxaana jira ciyaartoy ku dhawaaday in ay rekoodhkan jabiyaan balse wax yar ugu sigtay.
Mesut Ozil, Kevin De Bruyne iyo Cesc Fabregas ayaa ugu dhawaaday in ay jabiyaan ama barbareeyaan rekoodhka gool caawinta hal xili ciyaareed ee horyaalka Premier Leaque ee uu Thiery Henry haysto laakiin ilaa hadda waxaa la sugayaa ciyaartoyga xili ciyaareedka cusub la wareegi kara rekoodhkan, waana mid si khaas ah loo eegi doono.
5-Koobabka Champions Leaque Ee Ugu Badan Ee Uu Tababare Ku Guulaystay:
Tababaraha Bayern Munich ee Carlo Ancelott ayaa xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay Allianz Arena aan gaadhin ujeediidiisii ugu waynayd oo ahayd in uu Bavaria ka caawiyo koobka Chamions Leaque, laakiin waxa uu xili ciyaareedka cusub samayn karaan taariikh cusub oo layaableh haddii uu Bayern Munich kula guulaysto koobka Champions Leaque.a title.
Carlo Ancelotti ayaa jabin kara rekoodkii koobabka Yurub ee ugu badan ee ay ka siman yihiin Bob Paisley iyaga oo hadda min saddex koob oo koobka kooxaha Yurub ah ku soo guulaystay, laakiin haddii uu Ancelotti kooxdiisa Bayern Munich kula guulaysto koobka Champions Leaque waxa uu noqon doonaa tababarihii abid ugu horeeyay ee afar koob oo champions Leaque ah ku guulaystay.
6-Goolasha Heerka Groupyada Champions Leaque Ee Ugu Badan:
Dabcan waxa uu Cristiano Ronaldo hibo u leeyahay in uu taariikho badan ka abuuro Champions Leaque wuxuuna haddaba haystaa rekoodhka gool dhalinta abid ugu badan ee uu ciyaartoy ka soo dhaliyay koobka koooxaha Yurub ee Champios Leaque, laakiin xili ciyaareedka cusub Ronaldo ayaa la wareegi kara rekoodhka goolasha ugu badan ee uu ciyaartoy ka dhaliyay heerka groupyada Champions Leaque.
Waxaa hadda rekoodhka goolasha ugu badan ee heerka Groupyada Champions Leaque haysta halayaygii Real Madrid ee Rual Gonzalez kaas oo 53 gool ka dhaliyay kulamada heerka groupyada UCl, laakiin Ronaldo ayaa u baahan in uu afar gool ka dhaliyo lixda kulan ee ay kooxdiisa Madrid ka ciyaari doonto heerka Groupyada si uu rekoodhka Raul u dhaafo isla markaana uu taariikh cusub u sameeyo.
7-Kulamada Ugu Badan Ee Ciyaartoy Uu Ka Soo Muuqday Serie A:
Goolhayaha halyayga ah ee kooxda Juventus iyo xulka qaranka Italy ee Gianluigi Buffon ayaa hadda jamaahiirtiisa ku qalbi jabiyay in xili ciyaareedka 2017/18 uu noqon doono xili ciyaareedkiisii ugu danbeeyay, laakiin waxa uu ciyaarhaa ka fadhiisan doonaa isaga oo taariikh kale oo cusub ka sameeyay horyaalka Serie A haddii uu kulamo badanu safto kooxdiisa Juventus.
Paolo Maldini ayaa hadda ah ciyaartoya ugu safashada badan taariikhda horyaalka Talyaaniga wuxuuna rekoodhkan ku haystaa 647 kulan laakiin Gianluigi Buffon ayaa u baahan 29 kulan oo horyaalka Serie A ah si uu u noqdo ciyaartoyga abid ugu safashada badan Serie A. Gianluigi Buffon ayaa 38 ka kulan ee Serie A ee xili ciyaareedkan cusub uga baahan inuu safto 29 kulan taas oo taariikh cusub u abuuri doonta.
8-Goolasha Ugu Badan Ee Ay Kooxi Hal Xili Ciyaareed Ka Dhalisay La Liga;
Horyaalka La Liga ayaa haysta ciyaartoyda kubbada cagta ugu fiican intooda ugu badan, waxaana hadda baaqi ku ah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez iyo ciyaartoy la mid ah, waxayna xili ciyaareed kasta goolal aad ubadan, laakiin kooxaha La Liga ayaa soo awoodi waayay in ay gaadhaan rekoodhkii gool dhalinta hal xili ciyaareed.
Jose Mourinho ayaa ahaa macalinkii ugu danbeeayay ee ay kooxdiisii Real Madrid jabisay rekoodkii gool dhalinta La Liga ee hal xili ciyaareed kadib markii ay xili ciyaareedkii 2011/12 ay Los Blancos soo dhalisay 121 gool, laakiin kooxaha Madrid iyo Barca ayaa xili ciyaareed kasta jabiya gool dhalinta 100 gool iyada oo xili ciyaareedkii la soo dhaafay Barcelona dhalisay 116 gool balse xili ciyaareedka cusub ayaa la sugi doonaa haddii rekoodhkii Mourinho la jabin doono.
9- Goolasha Hal Xili ciyaareed Uu Ciyaartoy Ka Dhaliyay La Liga:
Lionel Messi ayaa haysta rekoodhka gool dhalinta hal xili ciyaareed ee horyaalka La Liga wuxuuna ku haystaa 50 gool oo uu dhaliyay xili ciyaareedkii 2011/12 laakiin tan iyo markaas wixii ka danbeeyay Lionel Messi laftiisa iyo xidigaha kale ee La liga ka ciyaara ayaa ku soo fashilmay in ay rekoodhkan gaadhaan.
Cristiano Ronaldo ayaa mar ugu dhawaaday wuxuuna dhaliyay 48 gool halka Lionel Messi uu xili ciyaareedkii la soo dhaafay dhaliyay 37 gool, waxaana xili ciyaareedka cusub la sugi doonaa haddii Messi uu gaadhi karo rekoodhka uu haysto ama ciyaartoy kale uu rekoodkan jabin karo.
10-Kaadhadhka Digniinta iyo Casaanka Ah Ee Ugu Badan:
Shaki kuma jiro in Sergio Ramos uu haddaba yahay halayay Real Madrid ah, laakiin rekoodhka kaadh qaadashada ee kabtanka Madrid ayaa xili ciyaareedka cusub heer kale gaadhi kara kadib markii uu soo qaatay 145 kaadh oo hurdi ama digniin ah isla markaana uu garoonka kaga baxay 17 kaadh casaan waana kaadhadhka uu ku qaatay kaliya kulamada horyaalka La Liga!!.
Sergio Ramos ayaa taariikh cusub dhigi kara haddii uu xili cyareedka cusub ee horyaalka La liga uu qaato kaliya 7 kaadh wuxuuna la wareegi doonaa rekoodhka kaadhadhka ugu badan ee horyaalka La Liga oo uu hasto Alberto Lopo Garcia.
11- Ciyaartoyda Koobabka Muhiim Ah Ee Ugu Badan Ku Soo Guulaystay:
Ma aha Cristiano Ronaldo, ma aha Lionel Messi laakiin waa Dani Alves xidiga taariikhda cusub u dhigi doona kubbada cagta kadib ku biirisitiisii PSG wuxuuna noqon karaa ciyaartoyda koobabka ugu muhiimsan ee ugu badan ku soo guulaystay. Dani Alves ayaa haddaba ku soo guulaystay 36 koob laakiin waxa uu u baahan yahay laba koob oo kale in uu la qaado PSG si uu rekoodhka koobabka ugu badan ee Maxwell oo 37 ah uu ugala wareego.
Xaqiiqdii rekoodhada ama waxyaabaha taariikhiga noqon kara ee xili ciyaareedka cusub laga filan karo ayaan ku koobnayn qodobada aanu halkan idiinku soo gudbinay laakiin waxay kuwani ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee haddii ay dhacdo sida wayn looga hadli karo.